Tantara sy toetran'ny Roman Colosseum | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Toerana fitsangatsanganana, Fialantsasatra any Eropa, General, Italia
Misy toerana tokony ho hitanao farafaharatsiny indray mandeha amin'ny fiainanao, ary ny Rome Coliseum Iray amin'izany. Asa maritrano iray izay nijoro nandritra ny roa arivo taona teo ho eo ary manana tantara tena midadasika sy mahaliana, izay naseho tamin'ny sarimihetsika sy fanadihadiana maro, ka tsy ho olon-tsy fantatra. Na izany aza, azo antoka fa be ny zavatra tsy fantatrao momba ity tsangambato italiana ity.
Ity Colosseum ity, fantatra ihany koa amin'ny Amphitheater Flavian, nanomboka ny fananganana tamin'ny taona 70 am.fan.ir. C. eo ambany fahefan'i Vespasiano, izay nisy ny farihin'i Nerón. Betsaka ny vinavinan-kevitra momba ny antony nananganana azy, ary heverina fa mety ho asa fandresena aorian'ny fandresen'ny Romanina, fa koa te hody any Roma faritra iray izay nampiasain'i Nero manokana hamorona ny fonenana, ny Domus Aurea. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny Colosseum Romanina ve ianao?
1 Tantara sy curiosities
2 Rafitra Colosseum
3 Ny Colosseum anio
Tantara sy curiosities
Ny fitadiavana ny tantaran'ny Colosseum manontolo dia haharitra ora maro, na dia azo antoka aza fa zavatra tena mahaliana. Ny fananganana azy dia manomboka amin'ny taona 70 sy 72 d. C. ary ny anarany ankehitriny dia avy Colossus an'i Néron, sarivongana teo akaiky teo ary tsy voatahiry ankehitriny. Ny ankamaroany dia natsangana teo amin'ny Domus Aurea, nameno fasika ny Farihin'i Nero. Vita teo ambany fiahian'ny Emperora Titus io, tamin'ny taona 80 am.fi Betsaka ny te hahafanta-javatra momba an'io Colosseum io, noho izany dia hiezaka ny hahita ny sasany amin'izy ireo izahay.
Tao amin'ity Colosseum ity dia nisy olona 12.000 afaka 80 andalana mijoro. Ny maha-zava-dehibe ny mpijery dia nihazakazaka hatrany ambany ka hatrany ambany no misy ny manan-karena sy matanjaka indrindra eto Roma, toa ny amperora, loholona, ​​mpitsara na pretra. Any amin'ny faritra ambony no misy ny Romana faran'izay mahantra, ambany toerana ara-tsosialy noho ny hafa. Tao anatiny dia seho maro no notanterahina, ilay malaza indrindra ady amin'ny gladiatera. Nisy ihany koa ny ady tamin'ny biby, famonoana ho faty ampahibemaso, famerenana ady, tantara an-tsehatra avy amin'ny angano kilasika na naumaquias, izay ady an-dranomasina. Inoana fa tamin'ny fiandohany dia feno rano ny tapany ambany hanatanterahana ireo ady ireo.
Ity Colosseum ity notokanana tamin'ny taona 80 am.fan.ir. C., ary io no amphiteater lehibe indrindra, miaraka amin'ny fankalazana izay naharitra 100 andro. Ny lalao farany ao dia hatao amin'ny taonjato faha-XNUMX, mihoatra ny daty izay heverina fa nifarana ny Fanjakana Romanina. Taty aoriana, ity tranobe ity dia nanana fampiasana maro, satria fialofana, ozinina ary fitrandrahana vato io. Nampiasaina ho toeram-pialofana Kristiana izy io tamin'ny farany, noho izany dia nahavonjy ny tenany mandraka androany, satria maro amin'ireo vatony no nampiasaina hananganana ireo trano vaovao tao an-tanàna. Amin'izao fotoana izao dia naverina amin'ny laoniny amin'ny faritra sasany izy io ary ny tokotanin-kazo izay ny fasika dia tsy voatahiry, ka ny ambany dia azo jerena, saingy io dia iray amin'ireo asa lehibe an'ity empira nanjavona ity.
Ny rafitr'ity amphitheater ity dia zava-baovao tanteraka, satria izy no lehibe indrindra naorina. Tao anatiny izy ireo ny fasika sy ny hypogeum. Ny kianja filalaovana dia ny kianja filalaovana, boribory boribory misy lampihazo hazo izay rakotra fasika, izay nanaovana ny seho. Ny faritry ny hypogeum dia ny any ambanin'ny tany miaraka amin'ny tionelina sy tranomaizina misy ny gladiatera, ny voaheloka ary ny biby mandra-pivoak'izy ireo amin'ny kianja filalaovana. Ity faritra ity dia nanana rafi-pitaterana lehibe hamindrana ny rano, noheverina fa taorian'ny fampisehoana an-dranomasina naumaquia. Ny faritry ny Cávea dia ny fijoroana, miaraka amin'ny lampihazo, izay nametrahana ireo endri-tsoratra malaza indrindra.
Ny ampahany iray hafa koa izay tsy ampoizina na dia amin'izao fotoana izao aza dia ireo antsoina hoe mandoa, izay fivoahana hidirana ny lalantsara hivoahana ny Colosseum. Navelan'izy ireo handeha ny olona marobe tao anatin'ny fotoana fohy, ka olona 50.000 XNUMX teo ho eo no azo nafindra tao anatin'ny dimy minitra. Kianja marobe ankehitriny no tsy afaka nifanaraka tamin'ireo sanganasa ireo sy ny fiasan'izy ireo lehibe.
Ao amin'ny faritra ivelany dia ahitantsika a tarehy amin'ny rihana efatra apetaka, miaraka amin'ny tsanganana sy ny tohany, ary ny faritra ambony mihidy. Izany dia manome endrika mora kokoa ny amphiteater. Amin'ny ambaratonga tsirairay dia afaka mahita fomba hafa ianao, zavatra mahazatra amin'ny tranobe maro tamin'izany fotoana izany. Mampiasa ny fomba Tuscan, Ionic ary Korintoana izy ireo, ary eo an-tampon'ny antsoin'izy ireo hoe compound.
Ny fifohazana Ampahany iray hafa io izay tsy voatahiry intsony, ary izy io dia fonosana lamba naparitaka mba hiarovana ny besinimaro amin'ny masoandro. Ny andry vita tamin'ny hazo sy lamba no nampiasaina, vita tamin'ny sambo tamin'ny voalohany, ary vita tamin'ny lamba rongony, izay maivana kokoa. Nisy totalin-tsarimihetsika 250 azo ampiasaina mitokana mba handrakofana ampahany vitsivitsy fotsiny raha ilaina.
Ny Colosseum anio
Androany, ny Colosseum Romana dia iray amin'ireo manintona mpizahatany lehibe indrindra ao amin'ny tanàna italianina. Tamin'ny taona 1980 dia nambaran'ny UNESCO ho lovan'ny World Heritage, ary tamin'ny volana Jolay 2007 dia noheverina ho iray amin'ireo Ny zava-mahatalanjona vaovao fito amin'ny tontolo maoderina.
Amin'izao fotoana izao dia voaloa ity fisarihana ity, ary raha afaka mahita azy dia tsara kokoa raha ny maraina no vao mahazo tapakila faran'izay haingana. Misokatra amin'ny 8.30 ora sy sasany maraina isan'andro izy ary 12 Euro ny tapakila ho an'ny olon-dehibe. Fomba iray hafa ahazoana ny tapakila dia ny fampiasana ny Roma Pass, karatra ahazoana fihenam-bidy amin'ireo toerana manintona sy tsangambato samihafa ao an-tanàna, ary tsy tokony hilahatra koa.
Ao anatin'ny Colosseum dia afaka mandray fitsangatsangana ianao ary amin'ny rihana ambony misy tranombakoka natokana ho an'i Eros, andriamanitra grika. Iray amin'ireo hetsika hafa mifandraika amin'ny Colosseum ny filaharan'ny Papa's of the Cross amin'ny Zoma Masina isan-taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Italia » Tantara sy toetra mampiavaka ny Colosseum Romana